Yaman: Madaxweynihii hore, Cali Cabdalla Saalax oo galabta la dilay – Kasmo Newspaper
Yaman: Madaxweynihii hore, Cali Cabdalla Saalax oo galabta la dilay
Updated - December 4, 2017 6:09 pm GMT
London (Kasmo), Wararka ka imanaya dalka Yaman ayaa ka warramaya in Madaxweynihii hore Cali Cabdalla Salax la dilay galabta, isaga oo ka cararaya Caasimadda Sanca, kuna sii jeeda magaalada uu ku dhashay ee Sinhan. Geeridiisa waxaa xaqiijinaya xoogaggii taabacsanaa iyo fallaagadii dishay ee Xuutiga qudhooda.
Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee Xuutiyiintu maamulaan ayaa laga sheegay in “hoggaamiyihii khaa’inka ahaa la dilay isaga iyo taageerayaashiisiiba”. Warka waxaa kale oo xaqiijinaya, Cali Al-Bukhaiti, siyaasiga ku dhowaa xisbiga “General People’s Congress” ee Cali Cabdalla Salax.
Madaxweynihii hore waxaa la dilay ka dib markii la weeraray kolonyo gaadiid iyo ciidan ah oo uu la socday, muuqaallo la soo dhigay Baraha Bulshadana waxaa ka muuqday maydkiisa oo la waldaaminayo.
Saalax waxaa xilka Madaxweynaha Yamanta Woqooyi loo dhaariyay 17kii July 1978, markii dalku la midoobay Koofurtana waxaa sannadkii 1990kii loo magacaabay Madaxweynaha Yaman.
Sannadkii 2012, ka dib kacdoonkii dadweynaha Carabta, xasillooni darro ka dhalatay darteed waxaa khasab ku noqotay in uu xilka iska casilo, kuna wareejiyo Madaxwene ku-xigeenkii, Mansuur Hadi. Markaa ka dib wuxuu xulufo la noqday Maleeshiyaadka Shiicada ah ee Xuutiga, kuwaas oo 22kii Jenaayo 2015 afgambi kagala wareegay taladii, Madaxweynihii cusbaa.
Iska horimaadka Saalax iyo Xuutiyiintu wuxuu soo bilowday 23kii Agosto 2017, markaas oo qoloba qolada kale ku eedeeysay in ay ballantii ka baxeen.
Wakhti yar ka hor xoogagga Xuutiyiintu waxay qarxiyeen gurigiisii, ka dib narkii uu si rasmi ah ugu dhawaaqay in uu la shaqayn doono xulufada Sacuudigu hoggaamiyo isaga oo shuruud uga dhigay in ayan dadaka rayidka ah laynin.